အေးနေ၀င်း နဲ့ သန္တာလှိုင် က သူငယ်ချင်းလေးပါပဲ တဲ့……. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Celebrity » အေးနေ၀င်း နဲ့ သန္တာလှိုင် က သူငယ်ချင်းလေးပါပဲ တဲ့…….
အေးနေ၀င်း နဲ့ သန္တာလှိုင် က သူငယ်ချင်းလေးပါပဲ တဲ့…….
Posted by Mee Wah on Jun 25, 2014 in Celebrity, Entertainment, Facebook |3comments
ဒေါ်ရင်ဝိုင်း မူကြိုကတည်းက အတူတူတက်ခဲ့ကြတဲ့ အလယ်က သူငယ်ချင်းသုံးယောက် သင်္ကြန်တွင်းတုန်းက ညတိုင်းဘုရားအတူတူ ဖူးခဲ့ကြတယ်။ ဘာအဓိဠ်ာန်မှမရှိပေမယ့်လည်း လုပ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ ကိစတစ်ခုအောင်မြင်သွားခဲ့လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျေနပ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာ share လုပ်သင့်တယ်ထင်လို့ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
အမရဲ့အဖေထောင်ကျနေတုန်းက 98 99 မှာ Red Cross မရှိသေးတော့ ဒီသူငယ်ချင်း ၂ယောက်ပဲ အတူတူတိတ်တခိုး လှုပ်ရှားခဲ့ကြတယ်လေ…. နောက်ပိုင်း NGO Red Cross ရောက်လာမှ RC ကနေတဆင့် ထောင်ထဲကနေ အပြင်ကိုတရားဝင် စာလေးရေးလို့ရတာ။ ၄နှစ်အရွယ်ကနေ အခုချိန်အထိ ဘာလုပ်လုပ် အတူတူပဲ။ ရည်းစားတွေပြောင်း အိမ်ထောင်တွေကျ ခလေးတွေသာ မွေးရင်မွေးသွားမယ်…. ဒီ ၂ယောက်ရဲ့ friendship ကတော့ အခုထိမပြောင်းလဲသေးပါဘူး။
မော်ဒယ် သန္တာလှိုင်ရဲ့အိမ်မှာ ဒီလဆန်းပိုင်း အိမ်တက်လုပ်တယ်၊ ပရိတ်ရွတ်တယ်လို့ မကြာသေးခင်က ဖော်ပြခဲ့ပါသေးတယ်။ သမီးနဲ့ သားကို ဗုဒ္ဓဘာသာ သင်တန်းတက်ဖို့ စီစဉ်ပြီးပြီ လို့လည်း မှတ်ချက် ရေးထားပါတယ်။ သူကိုယ်တိုင်လည်း “မွေးကတည်းကနေ အခုချိန်အထိ ဗုဒဘာသာဘဲ ကျင်ကြံ ကိုးကွယ်တာပါ“ လို့ သန္တာလှိုင်က မှတ်ချက်ရေးထားပါတယ်။
တို့ကျတော့လဲ တုန်းချက်က အကောင်ပြတာတောင်အရိပ်လောက်ဘဲမြင်တာပါ….လေ….
သတင်းတွေတော့ သာမန်ကာလျှံကာပဲ ဖတ်သွားပါတယ်
♪♫ ♪♫ငယ်…သူငယ်ချင်းရေ…ခုတော့ငယ်ကျွမ်းဆွေ…♪♫ ♪♫